IMingshuo Electric idlule isitifiketi se-TUV yathola isitifiketi somkhiqizo wegolide kanye nesitifiketi samandla
Ngo-2017, iMingshuo state solid solid high welding machine ithole isitifiketi se-Russian GOST - R ngenxa yezidingo zezitifiketi zomshini wokushisela wamakhasimende; Ngo-2020, iMingshuo Group inqobe ilungelo lobunikazi lobuchwepheshe kumshini wokushisela, kanti abanye abazali abaningana mayelana ne-welder bayacelwa. ...
Ngo-2018, uMingshuo Electric waletha i-IGBT Solid State High Frequency Welder ukuthi ibambe iqhaza kulo mbukiso
NgoSepthemba 2018, iMingshuo Group ibambe iqhaza ku-8 All China - International TUBE & PIPE INDUSTRY TRADE FAIR as Exhibitor.The booth no ::2C55. Ngaleso sikhathi, sasiphethe umshini omusha wokushisela - IGBT Solid State High Frequency Welder. Lo mshini usebenzisa ubuchwepheshe obusha - ...
Ungazikhetha kanjani izinto zokuxhumana zokushisela imvamisa ephezulu?
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zokushisela imvamisa ephezulu, i-welding yokuxhumana kanye ne-induction welding. Ukushisela induction kuyindlela yokushisela engathintani usebenzisa amakhoyili. Imininingwane Welding ukusetshenziswa izinto conductive ukuhola ngqo ephezulu imvamisa zamanje endaweni Welding amapayipi zensimbi, futhi t ...